Enwere mkpu mkpuchi obi na obi nke Lumumba? Ụfọdụ ndị na-eche ma Congo (Afrika) na-enwe nsogbu ịmara akụkọ ha? Ndi Congo na-eme ihere nke oge gara aga? Ma, nke ahụ bụ akụkọ ha, ha aghaghị ịma ya
Site na: KongoLisolona: June 29, 2019 00: 50 Enweghị asịsa
Ha merụrụ ụfọdụ n'ime ndị agbata obi anyị, ha nyere aka wepụ eziokwu ahụ ma merụọ nnwere onwe anyị. Kedu ihe ọzọ m nwere ike ikwu ??
Ma ọ nwụrụ, ndụ, n'efu ma ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ na iwu nke ndị colonial, ọ bụghị onye m ka ọ dị mkpa. Ọ bụ Congo, ọ bụ ndị ogbenye anyị nweere onwe anyị ka ha bụrụ ụlọ nke anyị na-ele anya na-enweghị, mgbe ụfọdụ site na ọmịiko ọmịiko, mgbe ụfọdụ na ọṅụ na obi ụtọ, ma okwukwe m ga-anọgide na-enweghị nchebe . (Patrice E. Lumumba).
Akụkọ Frantz Fanon Ihe mmụta nke UN: Congo Crisis na PE Strategies Lumumba, 1960 Years "Congo na-agbasi mbọ ike maka nnwere onwe, okwu na usoro, ndị isi akụkọ (History Lessons)"
Ọkt31 03: 57